प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउन अश्लील भिडियो ? अनुसन्धान शुरु « Kakharaa
प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउन अश्लील भिडियो ? अनुसन्धान शुरु
४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नामा खोलिएको वेबसाइड दूरुपयोग भएको छ । त्यो वेबसाइडमा ‘पोन’ भिडियो कसले कहाँबाट कसले अपलोड गर्यो ? भन्ने खुल्न सकेको छैन । केपी शर्मा ओली डटकम (kpsharmaoli,com) मा अश्लील सामाग्री राखिएकोबारे सरकारले अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ ।
शुरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको वेबसाइड लामो समयदेखि दूरुपयोग भएको पाइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि पोर्न साइडलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीकै नामा रहेको डोमेनमा भने कयौ पोर्न भिडियो अपलोड भएका छन् ।
आइटी कम्पनी संचालकका अनुसार यो वेबसाइट नेपालभर खुल्न नसक्ने बनाउन सक्छ । यो डोमेन प्रधानमन्त्रीका नाममा भएकोले यसको असर अन्तर्राष्टिय क्षेत्रसम्मै रहन्छ । नेपालमा नदेखिने बनाउने भन्दा पनि सरकारले यो डोमेनप्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरी फिर्ता गर्नुपर्ने आइटी विद्को सुझाव छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।